Fumanisa indlela yokuhombisa igumbi lokuhlala ngezityalo | IBezzia
Susana Garcia | 05/04/2021 20:00 | Izixhobo zasekhaya, Ukuhonjiswa
Izityalo azizizo nje izinto eziphilayo ezisinceda ukuba senze indawo esempilweni ngakumbi ekhethekileyo, kodwa ziyinxalenye yomhombiso. Kwi Amagumbi amaninzi ekhaya sinokubeka izityaloNgokukodwa ukuba asinayo ithambeka okanye igadi esinokuhlala kuyo. Kuluvo oluhle ukongeza umbala kunye nezityalo ukwenza igumbi lokuhlala lamkeleke ngakumbi.
Las ukuhombisa izityalo kwindawo yokuhlala zinokubekwa kwiindawo ezininzi. Kubalulekile ukuba wazi apho ungazibeka khona ukuze zingaphazamisi kwaye zihombise. Ukuba uza kongeza ezinye izityalo ekhayeni lakho, ungathandabuzi ukubeka kwigumbi lakho lokuhlala ukuze indawo ibe mnandi kwaye intle ngaxeshanye.
1 Ungazikhathalela njani izityalo kwigumbi lokuhlala
2 Yongeza i-cactus kwigumbi lokuhlala
3 Yenza ikona yezityalo
4 Izityalo kwiibhasikiti ezi-wicker
5 Ukuxhoma izityalo kwigumbi lokuhlala
Ungazikhathalela njani izityalo kwigumbi lokuhlala
La Indawo yokuphumla yindawo eqhelekileyo apho kuchithwa iiyure ezininzi. Kungenxa yoko le nto imalunga nokwenza indawo ecocekileyo apho kufanelekileyo. Izityalo zisinceda ukuba siphucule ukufudumala nakweyiphi na indawo. Ukuzifumana kufuneka silwazi uhlobo lwesityalo esikuso kunye nenkathalo esiyifunayo. Kuba kufuneka sizithene, kufuneka sizinkcenkceshele kangakanani okanye ukuba zifuna ukukhanya ngokuthe ngqo okanye akunjalo. Kukwabalulekile ukuba sikhethe kuphela izityalo zangaphakathi, kungenjalo azizokwazi ukuhlala ngaphakathi.
Yongeza i-cactus kwigumbi lokuhlala
Los I-cacti kwindawo yegumbi lokuhlala ingumbono olungileyo, nangona ukuba inkulu, kufuneka inyamekele ukuze izilwanyana okanye abantwana bangonzakaliswa yiyo. Ezi cacti zilungele zonke iintlobo zobume bendawo. Kwamagumbi okuhlala benza izithuba ezinobuntu obuninzi. Umhombiso we-boho, isitayile seNordic okanye isitayile saseCalifornia zilungile ukuxhasa ukusetyenziswa kwezi cacti, ngakumbi ukuba zinkulu. I-cactus ayifuni nkathalo ingako, kuba kufuneka babe namanzi amancinci kwaye abathenwanga okanye nantoni na enjalo, ke ukuba sibatsha ekunyamekeleni izityalo yeyona nto ilungileyo.
Yenza ikona yezityalo
Ukuba u Njengohlobo oluqhelekileyo kunye nezityalo, umbono omkhulu kukongeza ikona kunye nezityalo. Sebenzisa isinxibo okanye indawo yokugcina iincwadi ukubeka izityalo kumanqanaba ahlukeneyo. Ungabongeza kwindawo apho unokukhanya okuhle, kufutshane nefestile. Iikona zezityalo zilungile nakweliphi na ikhaya kwaye ziyasivumela ukuba sizikhathalele ngokulula. Ungasebenzisa ifenitshala yakudala, kuba iya kuba nomtsalane ngakumbi. Ukuba ubeka izityalo ezininzi ekoneni, unokuzixuba, ukhethe ezinye ezahlukileyo, wenze ukwakheka okuhle.
Izityalo kwiibhasikiti ezi-wicker
Iibhasikiti zeWicker zithandwa kakhulu kuba zinjalo izinto zendalo ezongeza ukubamba okufudumeleyo ekhaya. Yiyo loo nto kumaxesha amaninzi zisetyenziselwa ukugubungela iimbiza kwaye zinikwe indawo ekhethekileyo. Ukuba uza kuthenga izityalo ezikhulu, ungasebenzisa olu hlobo lwebhasikiti kwindawo yegumbi lokuhlala. Ezinye zinepom pom okanye zipeyintwe, ke zilungele ukuhombisa ecaleni kwezityalo.
Ukuxhoma izityalo kwigumbi lokuhlala
Enye indlela yokubeka izityalo kwi Indawo yokuphumla inezityalo ezijingayo. Kukho iziqwenga zeekhonkco zokuzixhoma kwaye zibukeka zilunge kakhulu, nangona zifuna umsebenzi ongaphezulu kuba kufuneka ubeke iihanger kwaye ufake neembiza, ezingenakuba nkulu kakhulu. Olu hlobo lweembiza lusetyenziselwa ukwahlula iindawo okanye ukuhombisa iindonga nophahla. Ngumbono olungileyo osincedayo ukuba sisebenzise izityalo kwiindawo ezininzi egumbini kwaye sizenze zihombise.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Ukuhombisa igumbi lokuhlala kunye nezityalo
Ukubheja kwiikhadi ezinithiweyo zokwenza iimpahla zeediliya